Masar: Dad Ka Badan 200 Qof oo Lagu Dilay Masjid • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Masar: Dad Ka Badan 200 Qof oo Lagu Dilay Masjid
Wakaaladda Wararka Masar ee MENA ayaa sheegtay in ugu yaraan 235 qof ku dhinteen weerar bambaano iyo rasaas oo lala beegsaday dad ku cibaadaysanayay masjid ku yaal dhinaca waqooyi ee gacanka Sinai ee dalkaasi Masar .
Weerarku wuxuu ka dhacay Masjid ku yaal magaalada Bir Al-abed oo 40km u jirta Magaalada El-irish, Caasimada gobolkaasi, waxaana lagu beegay waxyar uun ka dib markii dadku ay ka soo baxayeenn salaada jimcaha, waxaana ku dhaawacmay 12o qof oo kale oo ay ku jiraan haween.
Madaxweynaha Masar Cabdifitaax El Sisi ayaa cambaareeyay weerarkaasi, waxaana uu ku dhawaaqay saddex maalmood oo baroordiiq ah.
Kooxna weli ma sheegan masuuliyada weerarka hase yeeshee kooxda ISIL ayaa horey weerar noocaan ah uga geystay Degaankaasi.
Wararku waxay sheegayaan in kuwa weerarka gaystay ay goobta ku yimaadeen Afar baabuur 4WD, ayna adeegsadeen walxaha qaraxa, kadibna ay rasaas ku fureen dadkii cibaadaysanayay. Telefishanada masar ayaa soo bandhigay muuqaalo muujinaya daraasiin dad ah oo dhiig qariyay oo yaala gudaha masaajidka.
Weerarkaasi ka dib, Ciidamada Masar ayaa weeraro dhinac cirka ah waxay ku qaadeen bartilmaameedyo looga shakisan yahay inuu ku dhuumaalaysanayaan kooxda ISIl ee Buuralayda Tuulada Bir Al-Abed.